News 18 Nepal || प्रविधि
मोडर्नाको खोपले कति समय काम गर्छ ? खुल्यो यस्तो रहस्य
एजेन्सी । बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्नाले आफूले बनाएको कोरोना खोपले कम्तीमा एक वर्षका लागि काम गर्ने बताएको छ । अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) ले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका दुईवटा कोरोना खोपमध्ये मोडर्ना पनि एक हो । एफडीएले मोडर्नासँगै फाइजर र बायोएनटेकले संयुक्त रुपमा बनाएको कोरोना खोपलाई पनि अनुमति दिएको छ । ‘हाम्रो आशा खोपले कम्तीमा एक वर्षका लागि काम गर्छ भन्ने हो,’ सोमबार जेपी मोर्गन हेल्थकेयर कन्फरेन्समा मोडर्नाका...
भारतमा कोभिड-१९ को खोपलाई अनुमति दिइदै, नेपालमा कहिले आउला ?
काठमाडौं । भारतले कोभिड-१९ को खोपलाई छिट्टै अनुमित दिने भएको छ । भारतको ड्रग कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डियाका भिजी सोमानीले बिहीबार आयोजना गरिएको एक वेबिनारमा अनुमति दिने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिएका हुन् । आज शुक्रबार यस सम्बन्धी महत्वपूर्ण बैठकको आयोजना गरिएको छ । आजको बैठकमा सेरम इस्टिच्युट अफ इन्डिया र भारत बायटेकले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति लागि यस अगाडि नै दुई पटक निवेदन दिइसकेको छ । दुई कम्पनीले सुरक्षा र...
तीन दिने भर्चुअल आईटी करियर कन्क्लेभ हुँदै
काठमाडौं । जनवरी ८, ९ र १० गते भर्चुअल रुपमा आईटी करियर कन्क्लेभ आयोजना हुने भएको छ । आईटी सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको टेक कम्युनिटी नेपालले कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको हो । कम्पनीले अंग्रेजी नयाँ बर्षको अवसरमा युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै आईटी करियर कन्क्लेभ आयोजना गर्न लागेको हो । उक्त कार्यक्रममा देश तथा विदेशमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल आईटीका विशिष्ट व्यक्तित्वको आगमन हुने जनाइएको छ । कन्क्लेभमा निःशुल्क रुपमा सहभागी...
अक्सफोर्डले विकास गरेको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपलाई अनुमति
एजेन्सी । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपलाई आम प्रयोगका लागि बेलायतले अनुमति प्रदान गरेको छ । अक्सफोर्ड र एक्सट्राजेनेकाद्धारा निर्मित खोप प्रयोगका लागि सुरक्षित रहेको निष्कर्षसहित यहाँको मेडिसिन एण्ड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सी (एमएचआरए) ले मान्यता दिएको हो । आउँदो सातादेखि नै आम रुपमा वितरण गर्ने भनिएको यो खोपको १० करोड डोज बेलायत सरकारले अर्डर गरिसकेको छ । जुन एक जनालाई दुई डोजका दरले दिँदा ५ करोड मानिसका...
पृथ्वीमा आउन सक्छन् एलियन ? वैज्ञानिकहरुको यस्तो खुलासा
एजेन्सी । के विश्वमा एलियनको अस्तित्व छ ? के एलियन दोस्रो ग्रहमा रहँदै आएका छन् ? यस्तो प्रश्नको जवाफ वैज्ञानिकदेखि आम मानिससम्म सबै जान्न चाहन्छन् । पछिल्लो केही दिनयता वैज्ञानिकलाई एलियनको सन्देश मिलिरहेको छ । यसबाट सावित हुन्छ कि पृथ्वीभन्दा बाहिर दोस्रो ग्रहमा पनि जीवन छ । यी सन्देशले एक नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । के वास्तवमा एलियन धर्तीमा आउन चाहन्छन् ? अहिले वैज्ञानिकको एक इन्टरनेशनल टिमलाई एक ग्रहको निकै...
पर्समा झुक्किएर पनि नराख्नुस् यस्ता चिज, बनाउनेछ कंगाल